200A Cable Accessories Vagadziri & Vatengesi | China 200A Cable Chishongedzo Fekitori
Anhuang nyanzvi muClass Bushing Extender, isu tinopa mhando yepamusoro Kirasi Bushing Extender. General: 600A kirasi bushing extender inobvumidza kuisirwa pane yakajairwa de-simba 600A yakafa mabreki masisitimu ekubatanidza kudzikisa tap plugs, kubatanidza plugs uye zvishandiso bushings. 200A Mutoro unotyoka nzvimbo dzegokora kusungwa uye kugokora gokora. Kana yaunganidzwa kumidziyo yekukwikwidzana, inopa yakanyatso nyudzwa, inodzivirirwa zvakakwana. Kit Zviri Mukati: EPDM bushing extender Kuchenesa Pepa ...
Nhanganyaya: 15kV 200A Load break Elbow Connector ndeye yakazara-inodzivirirwa uye yakasungirirwa plugins kumiswa kwekubatanidza pasi pevhu tambo kugovera simba sisitimu yepad-mound transformer, yakakomberedza magetsi pabhokisi bhokisi, tambo yebazi bhokisi rakashongedzerwa nemutoro kuputsa bushings. Iyo yegokora chinongedzo uye bushing muwedzero zvinosanganisira izvo zvakakosha zvinhu zvezvose mutoro mabhureki ekubatanidza. Inogona kusangana nechinodiwa chemitsara munyukireya. Kushanda: Loadbreak Elbow Connector inodzivirirwa zvizere uye mu ...
Anhuang nyanzvi Bushing zvakanaka, isu kupa yepamusoro Bushing zvakanaka. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIEEE386, uye IEC zviyero. Nhanganyaya: 15kV / 24kV 200A Bushing Well inoshandiswa zvakanyanya mudhivhiri-yepamusoro yedhivha-yakakwenenzverwa, inonyudza shanduko, chinja magiya, nezvimwewo. kuputsa bushing. Iyo bushing inoshandiswa pamwe chete netambo zvishongedzo senge: bushing insert, Rotatable F ...
Anhuang nyanzvi Bushing muwedzero, isu kupa yepamusoro Bushing muwedzero. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIEEE386, uye IEC zviyero. Nhanganyaya: 15kV 200A Bushing yekuisa shinda mune yepasirese bushing tsime kuti ipe zvakafanana basa seyakakosha mutoro kuputsa bushing. Kushandisa bushing inoisa kunoita kuti kumisikidzwa kwemunda uye kutsiva kuitike uye kuve nemazvo. Kuisa mabhushi uye zvigaro zvegokora zvinokwidza izvo zvakakosha zvezvinhu zvese mutoro wekubatanidza kubatana. Iyo bushing Insert inoshandisa patent ...
15kV 200A Mutoro Wakatsemuka Elbow Connector
Anhuang nyanzvi muRoad break Elbow Connector, isu tinopa mhando yepamusoro Loadbreak Elbow Connector. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neTEEE386, uye IEC zviyero. Nhanganyaya: 25kV 200A Load break Elbow Connector ndeye yakazara-inodzivirirwa uye yakasungirirwa plugins kumiswa kwekubatanidza pasi pevhu tambo kugovera simba sisitimu yepad-mound transformer, yakakomberedza magetsi pabhokisi bhokisi, tambo yebazi bhokisi rakashongedzwa nemutoro wekutsemura bushings. Iyo yegokora chinongedzo uye bushing muwedzero zvine iyo iyo essentia ...
Anhuang nyanzvi mune Loadbreak Elbow Connector, isu tinopa mhando yepamusoro Loadbreak Elbow Connector. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIEEE386, uye IEC zviyero. Nhanganyaya: Elbow Connector ndeye yakazara-inodzivirirwa uye yakatukwa plug-in kugumiswa kwekubatanidza pasi pevhu tambo kugovera simba system yepad-mound transformer, yakakomberedza magetsi pabhokisi bhokisi, tambo yebazi bhokisi rakagadzirwa nemutoro wekutsemura bushings. The kugokora connector uye bushing muwedzero zvinosanganisira zvinokosha zvinoriumba vose loa ...
Anhuang akasarudzika mu Rotatable Feedthru Insert, tinopa mhando yepamusoro Rotatable Feedthru Insert. Chigadzirwa chinosangana nezvose zvinodiwa neIEEE Standard 386 uye inochinjika zvizere nezvigadzirwa zvemukwikwidzi. 15kV 200A Rotatable feedthrough yekuisa tambo mune yepasi rose bushing tsime kuti ipe zvakafanana basa seyakasarudzika loadbreak bushing. Kushandisa bushing inoisa kunoita kuti kumisikidzwa kwemunda uye kutsiva kuitike uye kuve nemazvo. Kuisa Bushing uye kugokora zvigaro zvine t ...
Anhuang akasarudzika mu Rotatable Feedthru Insert, tinopa mhando yepamusoro Rotatable Feedthru Insert. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIEEE386, uye IEC zviyero. Nhanganyaya: 24kV 200A Rotatable feedthrough insert inoshandiswa kupa maviri bushings kubva kune imwechete chishandiso bushing zvakanaka. Inoita inoshandura radial-feed transformers kuti idyise iyo maTransformer uye ichiwedzera in-line inosunga kudzivirira zvese zviri nyore uye zvinoshanda. Yayo patent, yakavakirwa-mukati torque inodzora ratchet inodzivirira vanoshanda kubva netsaona b ...
Anhuang nyanzvi Bushing muwedzero, isu kupa yepamusoro Bushing muwedzero. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIEEE386, uye IEC zviyero. Nhanganyaya: 24kV 200A Bushing yekuisa shinda mune yepasirese bushing tsime kuti ipe zvakafanana basa seyakakosha mutoro kuputsa bushing. Kushandisa bushing inoisa kunoita kuti kumisikidzwa kwemunda uye kutsiva kuitike uye kuve nemazvo. Kuisa mabhushi mukati uye gokora zvinongedzo zvine zvikamu zvakakosha zvezvose zvinorema kubatanidza kubatana. Iyo bushing Insert inoshandisa patent w ...